Posted: 26 Nov 2011 08:29 AM PST
Maal Hijrah or oftenly called Awal Muharram is the first month of the Islamic calendar, during which fighting is prohibited.
It's haram or forbidden for human kind to wage war against each other, killing or getting involved in any kind of confrontation.
So, it's unlawful to fight during this month.
However, I doubt it. In Malaysia, I am sorry to say that the spirit of Awal Muharram is not really observed, except for the public holiday.
Let's see who will break the 'rules'...
Posted: 26 Nov 2011 08:24 AM PST
walaupun bilik bersepah due to the renovation process, tetap dapat pengunjung. terima kasih semua yang dtg memberi sokongan moral. huhu.
Posted: 26 Nov 2011 07:20 AM PST
At about half past twelve yesterday, I was so horrified to seeawoman drivingaMercedes-Benz who double- parked between two empty parking lots!!! Can you believe there are people who can afford to buyaluxury car, but cannot afford to pay 30 cents for half an hour's car park fees and to have the audacity to deprive others from parking there??? Unbelievably stingy and selfish!!
"Love people, not things; use things, not people. "
Posted: 26 Nov 2011 07:12 AM PST
there will be lots of activities going on tomorrow, sunday, 27 nov. in penang. fellow penangites, make it an interesting sunday by participating in all or at least one of the events.
1. Soft Launch of the Women's Centre for Change (WCC) Building Fund: Give · Build · Change
12.30 – 1.30pm at Little Penang Street Market, Upper Penang Road
The State Exco for Women Family and Community Development, YB Lydia Ong Kok Fooi will officiate the launch accompanied by WCC President Ms Mariam Lim and WCC Fundraising Ambassador, Datin Annie Chin. The launch will be celebrated with talented jazz singer Dasha Loganathan and musician Ronald De Leon who will perform two songs in line with WCC's quest to empower women and end the violence in women and children's lives.
2. . Reforming The Malaysian Health Care System
Free puiblic forum
1.00pm to 6.00pm at YMCA Room A, Jalan Macalsiter, Penang
Organised by the Penang Medical Practitioners' Society (PMPS), Health Action International Asia Pacific (HAIAP), People's Health Forum Malaysia (PHF Malaysia), Occupational Health and Safety Advisory, Association Penang and Aliran.
For further enquiries and reservations please call Ms Ewe/Ms Ng: 04 – 818 0288
IsaMember of Parliament for Parit Buntar. He isamember of the Pan-Malaysian Islamic Party (PAS) and hadaPhD in Political Science.
Is currently the Vice-President of Physicians for Social Responsibility Malaysia. He was past President of the Malaysian Medical Association (MMA).
IsaCommittee member of Medical Affairs Department and Federation of Private Medical Practitioners Association of Malaysia. He isaPracticing Cardiologist, tasked with dealing with the Ministry of Health on Healthcare issues.
Isamedical practitioner, specializing in Occupational Safety and Environmental Health. He is an Honorary Consultant with the National Poison Centre, USM and Honorary lecturer with the Discipline of Social and Administrative Pharmacy, School of Pharmacy, USM. He isamember of the Academy of Occupational and Environmental Science, Malaysia and Consultant with the Consumers Association of Penang and the Malaysian Trade Union Congress. He campaigns actively against environmental pollution due to low level ionising radiation and asbestos
Prof Chan Chee Khoon
Isahealth policy analyst at the Department of Social & Preventive Medicine, Faculty of Medicine, University of Malaya . His current research interests include emerging and re-emerging infectious diseases, policy issues in biomedical science and technology, environment and development, and health systems in transition
Isafounder member of the Coalition Against Privatisation of Health Care, and has been monitoring Health Care Reform for the past 15 years. He is currently the PSM Member of Parliament for Sg Siput.
3. The University and University Colleges Act (UUCA) and The Constitution.
2.00pm at the Town Hall, Esplanade.
Edmund Bon, Pusat Rakyat LoyarBurok;
Syahredzan Johan & Firdaus Husni, MyConstitution;
Haris Zuan, Diskopi;
Woon King Chai, UKM4.
Officiated by DCM II YB Prof. Ramasamy. Organised by the Government of the State of Penang and the Bar Council Constitutional Law Committee.
4. Launching of Local Democracy Month
3.00pm flaxh mob at Gurney Plaza and 6.00pm launching at Speakers Square.
Officiated by YB Chow Kon Yeow
this will be followed by the most interesting event…
5. Penang Against The Peaceful Assembly Bill
in conjuction with Launch of Penang Democracy Month 2011
6.30pm, Speakers' Square, Esplande.
hmm… so which one will i attend? well first of all, i will attend the WCC soft launch… but event no.2and3the time clashed. i actually like to attend event no.2as we all know healthcare is very important, but the problem is it starts at 1.00pm when the WCC event has not finished yet. the WCC event will finished at 1.30 and event no.3starts at 2.00 – so it will be just nice to attend event no.3after attending event no. 2. further more, the venue of event no.3is nearby to the venue of the WCC event… not forgetting it is just in front of the esplanade where speakers square is… where event no.4and5will happen.
ok lah i'll see how. if i can get away from WCC event early or can go to the healthcare event an hour late, then i'll go for event2on healthcare. if not, i'll go for event3on the UUCA and federal constitution. for sure i won't miss the last event!
i'll be there for whatever events i choose to be, armed with my camera and notebook!
Posted: 26 Nov 2011 05:57 AM PST
Posted: 26 Nov 2011 04:28 AM PST
I am writing this letter because I can no longer stand the level of
Please kindly allow me write about three Luyechun friends: Dr. Soe Aung, Dr. Kamal and I. We are from different race and religions and different in ages. But we love each other, work and help each other….wonderful period of our time. And now we know that we are fellow LYCs. Of course all of us love our motherland and wish to be peaceful, prosperous and free from all the socio-political problems.
Muhyiddin wants no Umno mischief ahead of 'mother of all elections'
Posted: 25 Nov 2011 11:45 PM PST
Mokhtar yesterday told Malaysiakini that the police had only rejected one application for "security reasons" and urged PKR to lodgeapolice report on the permits which were revoked.
Assalammua'alaikum para Muslimin dan Muslimat, para Mukminin dan Mukminat yang dihormati..
Rasanya kita boleh google sendiri maklumat terperinci berkenaan kalender Islam kita..
Sahabat2 di FB ramai telah mengingatkan kita supaya baca doa Akhir tahun dan Awal tahun.
Doa akhir tahun kita baca lepas sembahyang Asar..
Doa awal tahun kita baca sebelum Maghrib..pembetulan..selepas sembahyang Maghrib.
Google kalau tak pasti..
Kalau rasa was2 atau tidak yakin bacaan kita betul, pada pendapat saya, marilah kita pergi ke masjid hari ini..InsyaAllah.
Kalau tak sempat jugak, kita baca yang bahasa Melayu..InsyaAllah.
Jangan hampa..jangan rasa malu.
Yang penting kita berdoa sebaik2nya.
Kita doa apa yang kita boleh buat setakat yang mampu buat masa ini..
Pengetahuan agama kita boleh sentiasa diperkuatkan lagi..InsyaAllah.
Semoga Allah SWT mengampunkan segala dosa2 kita dan menjadikan kita lebih beriman dan bertakwa dari setahun ke setahun..
Selagi nyawa belum dicabut, kita berdoa biarlah kita dapat mengumpul amalan ibadah banyak2..Astaghfirullahhal'azeem.
Dapatlah kita nanti tergolong di antara roh2 para solihin dan dirahmati Allah SWT..InsyaAllah.
Mudah2an kita dijauhkan daripada seksa api neraka..Ameen.
Jomm kita cuba ke masjid untuk waktu Asar dan seterusnya Maghrib dan Isyak..InsyaAllah.
Dipersilakan sangat2 komen tentang Maal Hijrah.
Saya kurang pasti banyak perkara..pembetulan saya alu2kan..Syukran.
Saya mempunyai sebuah kitab tebal, besar, usang dan berwarna coklat berkulit keras..dalam bahasa Jawi..
Setelah arwah mak saya kembali ke Rahmatullah, saya mengambil dari tempat sejadahnya. Arwah mak selalu menyimpan buku2 kitab atas sebuah gobok buku kecil di tepi sejadahnya.
Saya teringat kitab zaman dulu ini akan dibuka dan dibacakan pada kami adikbradik masa kecik2..dan antara hari2 arwah mak dan arwah abah bacakan dengan panjang lebar ialah pada Awal Muharram..pengertian, doa2, tentang buku catitan dosa kita, dan bab2 yang patut kami tahu dsbnya.
Arwah abah meninggal kira2 35 tahun yang lalu..arwah mak lebih kurang 5-6 tahun yang lalu.
Waktu arwah Abah dah takder, arwah mak lah baca kitab ini.
Kami akan duduk ramai2 dan dia akan baca mukasurat2 yang berkaitan..
biasalah, saya yang selalu terlelap di pertengahan jalan.
Semalam, saya bawak turun dari rak buku dan kesat habuk pada kitab ini..
Saya berhajat hendak mentelaah kitab ini walaupun bacaan jawi saya merangkak2.
Tulisan jawinya halus jadi cermin mata pun kenalah tukar kepada yang jenis boleh membuat huruf kecil jadi besar..
Kitab ini sudah berusia lebih setengah abad..Wallahhu'alam.
Inilah satu2nya harta saya ambil dari arwah mak dan arwah abah.. kitab zaman dulu.
Sekarang baru terbuka hati hendak cuba membacanya..Alhamdulillah.
Posted: 25 Nov 2011 08:44 PM PST
Lim Kit Siang was speechless when Zulkifli Nordin raked the history of May 13, 1969 tragedy at the Dewan Rakyat. According to the MP, it was Kit Siang and his DAP who incited and triggered the incident, not MCA or Umno.
Read Sanggah Tok Janggut about it.
And for that reason, Zul said ISA was used to contain it. In fact, the contents of the new act to replace ISA will remain relevant in view of DAP racist politics which is turning our inter-racial relation intoatime-bomb.
"Saya mahu baca semula daripada laporan MAGERAN, laporan rasmi yang dibentangkan menceritakan tentang peristiwa 13 Mei membawa kepada perisytiharan darurat tersebut adalah kerana kebebasan bersuara yang sudah di luar kawalan. Tindakan racist yang melampau dan ini antara tindakan yang didalangi oleh Yang Berhormat Ipoh Timur dan parti beliau pada masa itu.
"Saya mahu baca, biar rakyat dengar semula apa yang mereka kata pada tahun 1969 membawa kepada peristiwa 13 Mei. Slogan yang dibawa pada masa itu ialah 'Malai si'. 'Malai si' ini maknanya 'Mati Melayu'. Kemudian kita lihat dalam himpunan-himpunan dan perarakan-perarakan yang mereka buat. Ini antara kenyataan yang mereka keluar pada 11 Mei, "Apa polis boleh buat, kita raja. Buang sama polis Melayu."
The report said that among the chants shouted by those taking part are:
"Melayu balik kampung, Melayu sekarang tiada kuasa. Sekarang kita Cina sudah control".
"Semua Melayu kasi habis, kasi halau semua polis."
I have not read the Mageran report but I believe Zul was aware of its content.
(Terima kasih Sanggah Tok Janggut)
Scanned photo of Korean pop group Girls' Generation member Tiffany withalittle baby, from the ninth edition of Letter from Angels project. Pretty cute…
The annual Letter from Angels project was initiated by photographer Cho Sei-hon to raise awareness for domestic child adoption. Various artists would take part in the photo shoot, which would be published on magazines (this one from InStyle) and showcased at public exhibitions. Image via Sosiz [Kr] and Snsdtiffany.
SNSD series – Previous: SPAO winter 2011 |
SNSD Tiffany – Letter from Angels from YeinJee's Asian Blog
Source: "မန္တလေးက စိန်ပီတာကျောင်း" from Kaungkin, Written by ဖိုးသံ(လူထု)
အဲဒီကျောင်းမှာ ယောက်ျားလေးကအင်မတန်နည်းပါတယ်။ သူငယ်တန်းကြီးအောင်ရင် ကျောင်းထွက်လက်မှတ် ထုတ်ပေးပြီးတခြားကျောင်းကို ပြောင်းခိုင်းပါတယ်။ သူငယ်တန်း တတန်းမှာယောက်ျားလေးကျောင်းသားက လေးပုံတပုံ တောင်မရှိဘူးထင်ပါတယ်။ ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းခလေး အပြောအဆိုအဆက်အဆံလည်း အရမ်းကိုနည်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ဖာသာကျနော်တို့နေ၊ ကျနော်တို့ဖာသာကျနော်တို့ကစားကြတာပါ။ ဆရာတယောက်မှမရှိပါဘူး။ အားလုံး ဆရာမတွေချည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်တန်းတွေကိုသင်တာမှာ ဗိုလ်မတွေ၊ ကပြားမတွေချည်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ဗမာစကားမပြောပါဘူး။ တချို့ကကျောင်းအပြင်မှာတော့ပြောကြတယ်နဲ့တူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျောင်းထဲမှာဘယ်သူမှ မပြောပါဘူး။ ကျနော်တို့ကလည်း ဆရာမတွေကို အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပဲပြောရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က အိမ်သာသွားချင်တယ်ဆိုတာလောက်ကလွဲပြီး ဘာမှပြောဖို့လိုတာမဟုတ်တော့ များများတတ်ဖို့လည်းမလိုပါဘူး။
အဲဒီတုန်းက ကျနော်တို့အချင်းချင်းငြင်းလို့မပြီး၊ အဖြေမထွက်နိုင်တဲ့ပြဿနာတခုကို အခုထက်ထိမှတ်မိနေပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အဲဒီခရစ်ယာန်မယ်သီလရင်ကြီးတွေရဲ့ခေါင်းဟာ ကတုံးလား၊ ဆံပင်ထားသလားဆိုတာပါပဲ။ ခဏခဏ ပြောကြ၊ ငြင်းကြတာပါ။ နောက်ဆုံးအဲဒီကျောင်းကသာ ပြောင်းလာရောအဖြေမရခဲ့ကြပါဘူး။
ပြောင်းလာတယ်ဆိုတာက စိန်ပီတာကျောင်းကိုပါ။ စိန်ပီတာကျောင်းကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းတုန်းကနဲ့ စစ်အပြီးမှာဆေးရုံအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်ကျောင်းနေတော့ စစ်ဒဏ်ခံထားရတာ သိပ်မတွေ့ရပါဘူး။ မန်ကျည်းပင် ကြီးတွေ၊ ကုက္ကိုပင်ကြီးတွေနဲ့၊ ဘော့လုံးကွင်းကြီးကလည်း စိမ်းလို့၊ အင်မတန်သာယာတဲ့ ကျောင်းဝိုင်းကြီးတခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက မန္တလေးမှာတက္ကသိုလ်(ကောလိပ်)ကလွဲရင် အကျယ်ဆုံးကျောင်းဝိုင်းရှိတဲ့ ကျောင်းလို့ပြောရင်ရမယ် ထင်ပါတယ်။
မန္တလေးမှာထူးခြားတာက ခရစ်ယာန်သာသနာပြုကျောင်းဝိုင်းကြီးတွေက အစိုးရကျောင်းဝိုင်းတွေထက်ကြီးတာပါပဲ။ အဆောက်အဦးတွေလည်းပိုကောင်းပါတယ်။ စိန်ပီတာကျောင်းက စာသင်ခန်းတွေ၊ အထူးသဖြင့်စာသင်ခန်းဟောင်းကြီး တွေဟာ ကျယ်လည်းကျယ်၊ မြင့်လည်းမြင့်၊ ဘော့လုံးကွင်းကြီးကိုဖြတ်တိုက်လာတဲ့ လေကတဟူးဟူးနဲ့မို့ အင်မတန်ပူတဲ့ မန္တလေးနွေမှာ ပန်ကာမလို၊ အဲယားကွန်းမလို သက်တောင့်သက်သာရှိလှပါတယ်။ ကျနော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် အဲဒီတုန်းက ကျနော်နေခဲ့တဲ့ကျောင်းနှစ်ကျောင်းအပြင် ဖားသားလဖုံး၊ စိန့်ဂျိုးဇက်(ခါးပတ်ဖြူ)၊ အေဘီအမ်၊ စိန်ဇေးဗီးယား၊ ၀က်စလီနဲ့ သံတဲကျောင်းတို့ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ သီပေါမင်းနေခဲ့တဲ့ သံတဲကျောင်းခေါ်ဒိုင်အိုဆီဇင်ကျောင်းဟာ သက်တမ်း အရှည်ဆုံးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အစိုးရကျောင်းတွေထဲက အမှတ်(၁)ကျောင်းကတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ ဗုံးဒဏ်ကလွတ်ခဲ့လို့ ကျောင်းအဆောက်အဦး ကြီးတွေအကောင်းပကတိကျန်ခဲ့ပါတယ်။ အမှတ်(၂)လို့နောက်မှာခေါ်ကြတဲ့ အမျိုးသားကျောင်းကတော့ ဘူတာရုံနဲ့နီးလို့ လားမသိဘူး၊ တကျောင်းလုံးပြောင်သွားပြီး ကျနော်တို့ကျောင်းနေပြီး နောက်မှအဆောင်ကြိးတွေ ပြန်ဆောက်ရပါတယ်။ ကာလတခု ကပ်တဲတွေနဲ့သင်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ အမှတ်(၃)ကျောင်း ဆိုရင်လည်း ၈၂နဲ့၈၃လမ်းကြားက မွတ်စလင်ဗလီပိုင် အဆောက်အဦများမှာ ကျောင်းကိုကပ်ဖွင့်ခဲ့ရတာပါ။ ၆၀စုနှစ်များထဲမှ အခုနေရာကိုပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့မှတ်မိနေပါတယ်။
ကျနော်ကစိန်ပီတာကျောင်းမှာ ပထမတန်းကစနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂နှစ်သား၊ ၃နှစ်သား အရွယ်မှာ ကျနော့်အမေ ဆေးရုံတက်လို့ အဲဒီကျောင်းကိုတခေါက်နှစ်ခေါက်ရောက်ဖူးပါတယ်။ ကျနော်တတန်းတက်တော့ ကျနော့်အမေဘယ် အဆောင်၊ ဘယ်အခန်းမှာနေခဲ့တယ်ဆိုတာတောင် မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ ကျနော်၂တန်းတက်တော့ အတန်းဟာ ကျောင်းဝိုင်းရဲ့ အရှေ့ဘက်ဆုံးနှစ်ထပ်ဆောင်ရဲ့ အပေါ်ထပ်အရှေ့ဘက်ဆုံးအခန်းဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းနဲ့ကပ်နေတာပါ။ အောက်ထပ်ကတော့ ဘော်ဒါကျောင်းသားတွေရဲ့ထမင်းစားခန်းပါ။ အဲဒီ အဆောင်ကြီးရဲ့မြောက်ဘက်က မန်ကျည်းပင်ကြီးတွေအောက်မှာတော့ လူတရပ်ကျော်လောက်မြင့်တဲ့ မြေပုံကြီးတွေရှိပါတယ်။ အ၀ါရောင်မြေစေးတွေဖြစ်ပြီး ခြောက်နေ၊ မာနေပါပြီ၊ ကျနော်တို့က အဲဒီမြေပုံကြီးတွေပေါ်မှာတက်လိုက်ဆင်းလိုက်ကစားကြပါတယ်။ အဲဒီလို ကစားကြရင် အနီးအနားမှာအရိုးတွေ၊ သံခမောက်အစုတ်တွေ ပြန့်ကျဲနေတာကို သတိထားမိပါတယ်။ စစ်အတွင်း ဆေးရုံဟောင်းရဲ့လက္ခဏာလို့ပဲအောက်မေ့ရမလားမသိပါ။
ပြောရရင် စိန်ပီတာဟာ အဲဒီတုန်းက မန္တလေးကအမျိုးသားကျောင်းတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သဘောထားတာပါ။ ဆရာတွေကလည်း တပည့်တွေကိုဒါကိုပဲတဖွဖွပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ တခြားကိစ္စတွေမှာ ငြင်းချင် ငြင်းနိုင်မယ်၊ စိန်ပီတာနဲ့ကွန်ဗင့်(ခါးပတ်အနီ)တို့ဟာ အဲဒီတုန်းကကျောင်းလခအများဆုံးပေးရတဲ့ ကျောင်းတွေဖြစ်တာ တော့ အမှန်ပါပဲ။ ကျနော်တို့ရှိတုန်းက မူလတန်းမှာ တလ ဆယ်ကျပ်၊ အလယ်တန်းမှာ ဆယ့်နှစ်ကျပ်နဲ့ အထက်တန်းမှာ ဆယ့်ငါးကျပ်လို့ထင်ပါတယ်။ (ကျနော့်မုန့်ဘိုးက တနေ့မှ တမူးပါ၊ နောင်တော့ ဆယ်ပြားပေါ့။ အထက်တန်းရောက်မှ တမတ်(နှစ်ဆယ့်ငါးပြား)ဖြစ်လာပါတယ်။)
ကျနော်တို့ကျောင်းမှာ ကျောင်းသားတွေမှာ အစိမ်းရောင်ကုတ်အင်္ကျီနဲ့ကာကီဘောင်းဘီရှည်ယူနီဖောင်း၊ ရင်ဘတ်မှာ ကျောင်းတံဆိပ်၊ နှုတ်ဖျားမှာ ကျောင်းသီချင်းစသဖြင့် အဲဒီတုန်းကအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင် အတော့်ကိုထယ်ဝါတဲ့ ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်း သီချင်းကအခုလိုပါ။
မန္တလေးမြို့မှာကျော်ကြားတာ၊ တို့ကျောင်းစိန်ပီတာ။ ။
ကျောင်းပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲတွေဘာတွေမှာ ပထမဆု ဒိုင်းတို့ ဖလားတို့ရတယ်ဆိုရင် မနက်ကျောင်းမတက်ခင် ကျောင်းအုပ်ကြီးရုံးခန်းရှေ့မှာစုကြရတော့ ကျောင်းအုပ်ဘရာသာက အဲဒီဆုကိုထုတ်ပြပြီး ဆရာဝီလျံက ဒိုင်းဆုရစိန်ပီတာကျောင်း ဘောလုံးသင်းကို ဂုဏ်ပြုတဲ့သံချပ်ဒီလို သုံးခါတိုင်ကြ၊ ထိုးကြပါတယ်။
"Three cheers for St. Peter's Football Team. Hip-hip- Hooray! Hip-hip- Hooray! Hip-hip- Hooray!
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းမှာ ဂုဏ်ထူးတွေနဲ့အောင်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလည်း ဒီလိုပဲကျောင်းသားအားလုံးရှေ့မှာ စီတန်းရပ်စေပြီး မိတ်ဆက်ပေးတာ၊ ဂုဏ်ပြုတာတွေလုပ်ပါတယ်။ စိန်ပီတာရဲ့သမိုင်းမှာ အောင်ချက်အနေနဲ့အထွန်းပြောင် ဆုံးနှစ်ကတော့ စစ်ကိုင်းငလျင်ကြီးလှုပ်တဲ့၁၉၁၉၅၇ခုနှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာပြည်တပြည်လုံးရဲ့ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ တို့အပြင် ထိပ်ဆုံး၂၅ယောက်ထဲမှာကိုပဲအများကြီးပါဝင်တယ်လို့မှတ်မိနေပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အခု နအဖ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဦးကျော်မြင့်နဲ့ စာရေးဆရာမောင်မိုးသူတို့လည်းပါပါတယ်။
စိန်ပီတာကျောင်းရဲ့အနောက်ဘက်ဝင်းထရံတလျှောက်မှာ ဧရာမကုက္ကိုပင်ကြီးတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီအပင်ကြီးတွေရဲ့ အောက်မှာအုတ်ခုံတွေရှိပြီး နေ့လည်မှာအိမ်မပြန်တဲ့ကျောင်းသားတွေဟာ ဒီအုတ်ခုံတွေပေါ်မှာ အိမ်ကပါလာတဲ့ထမင်း ချိုင့်တွေကိုဖွင့်ပြီး ထမင်းစားကြပါတယ်။ ကျောင်းမှာတနှစ်တခါလုပ်တဲ့ ပြေးခုန်ပစ်ပွဲကိုရောက်ရင် ကျောင်းကတမင်ဖိတ် ထားတဲ့ဧည့်သည်တွေကို ဒီအုတ်ခုံတွေပေါ်မှာ ကုလားထိုင်တွေခင်းပြီး ထိုင်စေလေ့ရှိပါတယ်။ အဖိတ်ခံရသူတွေအထဲမှာ ခါးပတ်နီကွန်ဗင့်ကျောင်းက ဘော်ဒါကျောင်းသူတွေလည်းပါပါတယ်။ သူတို့ဟာသီလရင်စစ္စတာကြီးတွေရဲ့ ကြပ်မတ်မှု အောက်မှာစည်းကမ်း၊ အိနြေ္ဒရှိစွာနဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုကြပါတယ်။ မိန်းခလေးလုံးဝမရှိတဲ့ စိန်ပီတာကျောင်းက ကျောင်းသားတွေအဖို့တော့ ဒါဟာရှုချင်စဖွယ်မြင်ကွင်းတခုဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းအကုန်နွေအကူးကာလမှာတော့ ဒီကုက္ကိုပင်ကြီးတွေရဲ့သစ်ရွက်ခြောက်တွေ မိုးဖွဲများလို ခပ်စွေစွေခပ်စောင်းစောင်း တဖွားဖွားကျနေတာကို ကျောင်းသားတိုင်းလိုလိုပဲ စာသင်ရင်း(စာထဲစိတ်မ၀င်စားတဲ့အခါ) ငေးမောနေမိကြ ပါတယ်။ အဲဒီရှေ့ကဘောလုံးကွင်းရဲ့ မြက်ခင်းပြင်ကြီးကလည်း စိမ်းလို့လေ။ စိတ်လေချင်စရာမြင်ကွင်းပေါ့။ စိန်ပီတာ ကျောင်းမှာက အောင်စာရင်းတွေကို နှစ်စဉ်ဧပြီလ ၁၀ရက်မှာထုတ်လေ့ရှိပါတယ်။ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်၊ သင်္ကြန်မတိုင်မီလေးမှာပါ။ အဲဒီလိုအချိန် ကျောင်းကြီးထဲကိုပြန်ရောက်သွားရင် လူခမ်းခြောက်နေတဲ့ကျောင်းဝိုင်းကြီးကိုကြည့်ပြီး လွမ်းသလိုလို ဆွေးသလိုလိုဖြစ်ရတာပါပဲ။ ကျနော်တို့ဟာ ကျောင်းဝိုင်းကြီးထဲမှာ ဟိုလျှောက်ဒီလျှောက် သွားကြပြီး စောစောကပြောခဲ့တဲ့ ကုက္ကိလ်ပင်ကြီးတွေအောက်က ကြွေကျနေတဲ့ကုက္ကိုသီးတွေကို ကောက်ကြပါတယ်။ ပြီးရင်အိမ်ကိုပြန်ယူလာပြီး ငရုတ်ဆုံထဲမှာထောင်း၊ တူသဏ္ဌာန်လုပ်ပြီးတုတ်တချောင်းမှာတပ်ကစားကြပါတယ်။ အဲဒီလို ညက်အောင်ထုထားတဲ့ ကုက္ကိုသီးအစိုင်အခဲဟာ အင်မတန်မာပါတယ်။ သစ်သားထက်လည်းအလေးချိန်စီးပါတယ်။
ငါးနှစ်ခြောက်နှစ်အရွယ်ကနေ ဆယ့်ငါးနှစ်-ဆယ့်ခြောက်နှစ်အရွယ်အထိ(ကျနော်တို့ခေတ်တုန်းက ကိုးတန်းဟာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြစ်ပါတယ်) ပူပင်သောကမရှိ ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးနေခဲ့တဲ့ကျောင်းကြီးကို ခွဲခွာရပြီဆိုတော့လည်း တက္ကသိုလ်ဆိုတာရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုကရှိနေတဲ့အတွက့် ၀မ်းနည်းတယ်လို့မခံစားခဲ့မိတာကို ၀န်ခံရမှာပါ။ အခုတော့မှ လွမ်း ဆွတ်သလိုခံစားရပြီး ကြုံတိုင်းမေးနေမိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ကြားရတာက ဘော့လုံးကွင်းကမြက်ခင်းကြီးလည်း ပျက်စီးသွားပြီ၊ ကျောင်းကြီးကလည်း သာသာနာပြုတွေပိုင်တဲ့အပိုင်း၊ ပညာရေးရုံးအပိုင်းနဲ့ ကျောင်းအပိုင်းဆိုပြီး အပိုင်းပိုင်းအကန့်ကန့် ဖြစ်သွားပြီ စတဲ့စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတွေကိုပဲ ကြားရပါတယ်။ တချိန်ကရှိခဲ့ဘူးတဲ့ ဂုဏ်တွေသိန်တွေဆိုတာကတော့ မဆလခေတ်မှာ ပြည်သူပိုင်သိမ်းခံလိုက်ရကတည်းက ဆုံးပါးသွားတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ နအဖခေတ်မှာကျတော့ သမိုင်းလေး ကိုပါဖျောက်ဖျက်ပစ်ကြမယ့်သဘောရှိနေပါတယ်။
တကယ်က "စိန်ပီတာလည်း သူ့အချင်းနှင့်သူ့အဆင်းနှင့်"ပါ။
Posted: 25 Nov 2011 07:26 PM PST
Posted: 25 Nov 2011 02:55 PM PST
Amid the slaughter,aquiet house was singled out, solely because the residents were Jewish by WARREN KOZAK.
Hence the attack on Nariman House, one of 3,000-plus Chabad Houses around the world that provide assistance, religious services, food, lodging and Torah study to local and visiting Jews. "Chabad," an acronym for the Hebrew "wisdom, understanding, knowledge," is another name for the Lubavitcher movement, named after the city in Russia where this particular movement of Orthodox Jewish Hasidism was founded in the 18th century.
Chabad would probably be unknown to the outside world had it not been for Rabbi Menachem Mendel Schneerson, its charismatic leader from 1951 until his death in 1994. Known as the "Rebbe" to his followers, he tookasmall group ravaged in the Holocaust and electrified it withavision. Based in its new home of Crown Heights, Brooklyn, the Jewish movement grew rapidly, and today there are Chabad Houses from Morocco to Cambodia to Santa Fe.
While the Rebbe wasagreat Talmudic scholar, he was also an electrical engineer who studied at the Sorbonne and did work for the U.S. Navy during World War II. Perhaps because of his varied background, the Rebbe infused the Lubavitchers with entrepreneurialism. "This was notaman who was interested in creating followers," says Jonathan Sacks, the chief Rabbi of the British Commonwealth. "This wasaman who was passionate about creating leaders."
Sending out emissaries was part of the program from the start, in 1951. "These extraordinary people could have achieved enormous personal gain in business or as professionals, but instead dedicated their lives toahigher purpose," says Rabbi Yehuda Krinsky, chairman of the movement's educational and social services arms.
Chabad's model sounds more like that of Christian missionaries than what most people expect of Jews. But Chabad couples are not sent out to proselytize. They are meant to act as role models for other Jews, in order to createabetter world. Lubavitchers believe that every mitzvah (commandment) performed—whether it is helping someone in need or lighting the Sabbath candles—brings us all closer to the coming of the Messiah. "Love of God, of Torah and of every Jew—all three are really one and they cannot be separated," said the Rebbe upon assuming leadership of the movement in 1951.
"It was almost instantly reflexive for some, especially from knowing Gabi and Rivki," observes Rabbi Chanoch Gechtman, who together with his wife Leah now runs the Chabad House in Mumbai. "Great darkness must be challenged with bright light. WSJ. "
Posted: 25 Nov 2011 02:30 PM PST
Posted: 25 Nov 2011 02:22 PM PST
Cairo (AsiaNews) – "The situation is very unstable and uncertain," said Nagui Damian. "Young people, Christians and Muslims, are confident thatademocratic and secular Egypt can be created. It is for this, we are fighting," added the 30-year-old Copt who took part in recent anti-military demonstrations in Tahrir Square. For him, those Egyptians who are leading the protest movement do not want to be ruled by extremists or the military. "If radical Islamic groups take over, civil war will likely break out."
Today the Supreme Council of the Armed Forces apologised for the excessive use of force and the death of scores of people, which it described as "loyal sons of Egypt".
However, the situation of chaos could forceapostponement of next Monday's elections. For many demonstrators, the ongoing violence is incompatible with free elections.
"The massacre of Copts on9October, which ended in 28 deaths, brought Christians and Muslims together," Nagui explained. "Since then, moderate Muslims have expressed their solidarity to Christians and have accused the military of trying to divide the nation."
This solidarity is visible across the country, especially in the largest cities like Cairo and Alexandria. "In the past six months, various pro-democracy parties have been created with Copts and Muslims," he said. "Divisions persist but everyone, Christian or Muslim, is fighting side by side against the military and foranew Egypt. For days, they have occupied Tahrir Square."
However, this unity is not present among political elites, who tend to operate along confessional lines. "Right now, the Muslim Brotherhood and the Salafists are running the show. They have been waiting for decades to take over, and are well organised. Unlike us young people, they are well funded as well."
"In recent months, the Brotherhood has kept saying that they would win most of the seats ifavote was held. This is based on an election held in the Doctors' Union, which they won and which they use to project future victories."
"Many of us are divided over what to do," Nagui Damian said as he discussed the possibility that the vote might be postponed, as many are demanding in the square. Some "think that putting off the vote might strengthen the military. Others are convinced that voting in the current tense situation is impossible. The risk of manipulation and fresh violence are too high. People should be able to take part in elections without fear."
"Many Christians are fleeing the country," the young man noted. "They fearavictory of Islamic parties. Priests, Catholics and Orthodox, as well as the more active members of the community are doing all they can to stop this exodus. Right now, the community must be united. Our duty is to stay put and make free elections possible."
"We Christians want to do our best in these elections. And we shall do it with moderate Muslims. There are parties led by Muslims who are opposed to the stranglehold of the Muslim Brotherhood and are ready to support pro-democracy movements." Asia News.